Electronic Design (Schematic & PCB layout) - Shenzhen Fumax Technology Co. , Ltd.
Fumax tech သည်အီလက်ထရောနစ်ဒီဇိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော ၁၀ နှစ်ကျော်အတွေ့အကြုံရှိသောအီလက်ထရောနစ်ဒီဇိုင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျယ်ပြန့်စွာစီစဉ်ပေးသောယုံကြည်စိတ်ချရသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒီဇိုင်း၊ ရှေ့ပြေးပုံစံနှင့်မတူကွဲပြားသောအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများကိုစိတ်ကြိုက်နှင့်အလွန်တိကျသောပုံစံဖြင့်တီထွင်သည်။ သင်၏အကြံဥာဏ်များကိုပြောင်းလဲခြင်း (သို့) အလုပ်လုပ်သောပုံကိုအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတစ်ခု၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများလုပ်ဆောင်ရာတွင်အထောက်အကူပြုနိုင်သည့်ထုတ်ကုန်တစ်ခုသို့ကျွန်ုပ်တို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ကျွမ်းကျင်သောအင်ဂျင်နီယာများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်ထူးခြားသောအီလက်ထရောနစ်ဒီဇိုင်းကိုတည်ဆောက်သည်။
Fumax အင်ဂျင်နီယာသည်ဖောက်သည် ၅၀ ကျော်နှင့်အတူအီလက်ထရောနစ်ဆားကစ်ဒီဇိုင်း ၁၀၀ ကျော်အောင်မြင်စွာပြီးစီးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ဒီအတွေ့အကြုံက fumax အင်ဂျင်နီယာကိုအီလက်ထရောနစ်ပတ် ၀ န်းကျင်ဒီဇိုင်း (front-end အင်ဂျင်နီယာ) အတွက်သီးသန့်အဆင့်မြင့်အင်ဂျင်နီယာများကိုကျယ်ပြန့်သောအသုံးချပရိုဂရမ်များတည်ဆောက်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
အီလက်ထရောနစ်ဆားကစ်ဒီဇိုင်း application များ၏အကွာအဝေးပါဝင်သည်:
•ရောနှောထားသော analog / digital ဒီဇိုင်းများ
Bluetooth နှင့် 802.11 ကြိုးမဲ့ဒီဇိုင်းများ
• RF ဒီဇိုင်းသည် 2.4GHz အထိရှိသည်
• Ethernet interface ဆားကစ်
• Embedded microprocessor ဒီဇိုင်း
3. ဖောက်သည်လိုအပ်ချက်အပေါ်အခြေခံပြီးကန ဦး သိထား Generate
၄။ Fumax အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များမှသိပ္ပံနည်းကျစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
လိုအပ်ပါက ၅။ Software အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့၏ပါ ၀ င်ပတ်သက်မှု။
7. သိထားအပြီးသတ်။ PCBA လုပ်ငန်းစဉ်သို့သွားပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ PCB ဒီဇိုင်းများကိုကိုင်တွယ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်စက်မှုလုပ်ငန်း ဦး ဆောင်သော E-CAD ဒီဇိုင်းကိရိယာများဖြစ်သော Altium Designer & Autodesk Fusion 360 (Autodesk Eagle) ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားစက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းသာမကဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောအလုပ်များကိုလွယ်ကူစွာထိန်းသိမ်းနိုင်သည့်ဒီဇိုင်းများပို့ဆောင်ပေးသည်ကိုအာမခံသည်။